Paper Box - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Paper Box)
Akwukwo Akwukwo Ejiri Edere na Mbelata na Logo
Igbe Mpempe idtọ na Ltọ na Ntọala na Nice Logo Igbe onyinye, igbe kaadiboodu nke nwere mkpuchi maka ngwugwu onyinye. Igbe mpempe akwụkwọ na Logo, nwere ike iji ụdị mmechi niile bipụta okomoko logo gị. Igbe onyinye na akwa, igbe ngwongwo eji mkpuchi, mkpuchi di elu ma di
Obere akpa mpempe akwụkwọ onyinye eji ọla edo
Akpa Edere Edere Ekike na Golden Logo Akpa Akwụkwọ Edere Edere, akpa mpempe akwụkwọ e biri ebi, nke nwere akara na akara aha gị. Akwukwo Ejiji Ejiji, nwere ike ichikota ngwa ahia nke gi ma mee ka ahia gi di nma. Akpa mpempe akwụkwọ na Logo Golden, akpa mpempe akwụkwọ nwere aka, igbochi ọla edo na-acha ọcha, ezigbo...
Igbe ezi aka Craft Craft klas na aka
Igbe ezi aka Craft Craft klas na aka Akwukwo kaadiboodu Kraft, jiri akwukwo kraft di elu, odighi mfe imebi. Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ nwere aka, ọwụwa iji buru. Igbe kraft nke aka gi, nke eji aka gi na ihe okike nke aka gi, nwekwara ike ikpebi igbe a. Liyang Paper ngwaahịa co., Ltd bụ ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ azụmaahịa...
Mpempe Akwụkwọ Mpempe Akwụkwọ Mpempe Akwụkwọ Agba
Mpempe Akwụkwọ Mpempe Akwụkwọ Mpempe Akwụkwọ Agba A na-eme igbe onyinye a na igbe igbe, ọ dị oke mma na mbipụta akwụkwọ CMYK dị elu. Banyere ihe ahụ, anyị na-eji akwụkwọ nka maka igbe a, mana ị nwekwara ike ịhọrọ ụdị akwụkwọ ọzọ maka ikpu dị ka akwụkwọ pealu, akwụkwọ ederede, akwụkwọ ọla edo na ihe ndị ọzọ. N'otu...
Igbe Mpempe Akwụkwọ A Na-ewu ewu na-ewu ewu na Liid
Igbe Nchịkwa Populardị Nchapụta Populargba Mgbapụta na Nrọ A na-eme igbe nkwakọ ngwaahịa ncha a na igbe igbe dị mfe: mkpuchi na igbe dị n'okpuru, mana ọ na-adị okomoko site na akwụkwọ mmado CMYK dị elu, ị nwekwara ike ịhọrọ akwụkwọ pụrụ iche ndị ọzọ dị ka akwụkwọ pel, akwụkwọ ederede, akwụkwọ ọla edo na ihe ndị...
Igbe mpempe akwụkwọ Kraft mpempe akwụkwọ
Igbe mpempe akwụkwọ Kraft mpempe akwụkwọ Igbe akwụkwọ Kraft, na-adị mfe ma dị mma, nke e biri ebi akara Igbe Nkwakọ ngwaahịa Akwụkwọ dị elu, mee ka ngwaahịa gị gbutekwuo ndị ahịa Igbe ọgbụgba ọkụ Kraft, imewe dị mfe, ilele klaasị dị elu, mfe nkwakọ ngwaahịa. Liyang Paper ngwaahịa co., Ltd bụ ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ...
Onyinye onyinye apoti chọtara akpukpo ahihia
Onyinye onyinye chọkọletị ihe oriri nwere onyinye chọkọletị Nkwakọ ngwaahịa igbe Chocolate, ezigbo mma na imewe maka nchịkọta chocolate. Igbe onyinye chọkọletị, igbe igbe mara mma maka onyinye, na-adị mma okomoko. Igbe onyinye maka chọkọletị, igbe onyinye klaasị. Chọrọ ngwaahịa dị mma dị oke ọnụ ahịa, gaa n'ihu ma...
Mpempe akwụkwọ azụmaahịa na rịbọn ejiri aka
akpa akwa akwụkwọ ozi mma na rịbọn ahụ E guzobere Liyang Akwụkwọ Ngwaahịa Co., Ltd na 1999, nke dị na Dongguan,
igbe mpempe akwụkwọ nchekwa anwụ maka anwụ anwụ
igbe mpempe akwụkwọ nchekwa anwụ maka anwụ anwụ igbe mpempe mpempe akwụkwọ maka ugogbe anya anwụ nkwakọ na ebipụta akwụkwọ CMYK dị elu ihe dị n'ime igbe a na-agbaze site na suede dị nro, nke a nwere ike ichebe ugogbe anya maka anwụ site na ị na-agagharị n'oge ọ na - agagharị, n'oge nke njiri apị nke nwere...
Nkwakọ onyinye igbe ahụ na rịbọn ejiri aka
Nkwakọ ngwaahịa onyinye igbe omenala na rịbọn ejiri aka Igbe dị okpokoro mma d ị na -eme ka ọ dị mfe iwepụ, maka aka, ị nwere ike ịhọrọ rịbọn, eriri akwa ma ọ bụ eriri Polyester ụdọ. Mbipụta akwụkwọ edere ka edepụtara gị kwa! Liyang Paper ngwaahịa co., Ltd bụ ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ azụmaahịa dị na Dongguan, China. Pụrụ...
Nkwakọ onyinye onyinye agbamakwụkwọ
igbe onyinye onyinye agbamakwụkwọ Igbe okomoko nke ichoro maka onyinye agbamakwụkwọ ha nwere ike inye ndị ọbịa na-enwe mmetụta dị mma maka agbamakwụkwọ gị, ị nwere ike ịme omenala onyinye igbe agbamakwụkwọ gụnyere ọdịdị, nha, na ibipụta ya, ọnụahịa na-ehota na isi nke ozi nkọwa ndị a. Igbe onyinye pụrụ iche na-eme ka...
Igbe nkwakọ ngwaahịa onyinye ọ bụla na mkpuchi
Nkwakọ ngwaahịa akpa na igbe akwụkwọ onyinye Igbe onyinye onyinye dị n’ime igbe dị mfe: mkpuchi na igbe ukwu, mana akwụkwọ mpịakọta CMYK nwere ihe eji eme ya pụrụ iche na-eme ka ọ dị okomoko, ị nwekwara ike ịgbakwunye ụta rịbọn ahụ n’igbe ahụ iji mee ka ọ marakwuo mma! Enwere agba dị iche iche nke rịbọn maka nhọrọ gị!...
igbe onyinye nke hexagon kaadiboodu
igbe onyinye nke hexagon kaadiboodu A na-eme igbe onyinye okomoko ohuru na igbe hexagon , igbe kaadiboodu siri ike na mbipụta CMYK dị elu, ị nwekwara ike ịhọrọ akwụkwọ pụrụ iche ndị ọzọ dị ka mpempe akwụkwọ pel, mpempe akwụkwọ, akwụkwọ ọlaedo na ndị ọzọ. N'otu okwu, ngwaahịa anyị niile ahaziri ahazi dịka iwu gị si...
Igbe onyinye onyinye mara mma nke nwere ọla edo
Igbe onyinye onyinye mara mma nke nwere ọla edo Akwukwo mpempe akwụkwọ mara mma nke nwere njiri mara mma na-eme ka ọ dị mfe iwepu, maka aka, anyị na-eji ọla edo agbagọ n'oge a, ọ bụrụ na-ịchọrọ, ị nwekwara ike ịhọrọ rịbọn, eriri owu ma ọ bụ eriri Polyester ụdọ na ndị ọzọ. A na-ebi akwụkwọ maka iwu gị ka ọ dị mma....
Igbe kaadiboodu ojii na ngwugwu ọla eji mkpuchi
Igbe kaadiboodu ojii na ngwugwu ọla eji mkpuchi Igbe kaadiboodu nwere mkpuchi, igbe ndoodu ojii di nfe na mkpuchi, kpochapu mara mma. Igbe maka ọla, igbe ngwugwu ọla, dị mma dị ka onyinye. Black matte igbe, ihe eji hazie ya na ihe okike, oyuyo oji mara mma, juputara n’ihe banyere ulo oru gi. Liyang Paper ngwaahịa co.,...
Igbe ngwongwo na-ekpo ọkụ na igbe azu
Igbe ngwongwo na-ekpo ọkụ na igbe azu Igbe ndozi azụ, akara mbipụta omenala edere na ndochi ndozi, na-adị mma. Igbe mpempe akwụkwọ, igbe dị ọnụ ala maka ịkwakọ ngwaahịa, ezigbo mma. Igbe mpempe akwụkwọ dị ọnụ ala, ego dị ala maka igbe nchịkọta ọkwa dị mma, nhọrọ dị mma Chọrọ ngwaahịa dị mma dị oke ọnụ ahịa, gaa...
Akpa onyinye onyinye dị okomoko nwere aka rọba
Akpa onyinye onyinye dị okomoko nwere aka rọba Akpa onyinye okomoko , eji aka ya kpuchie ya. Akpa Akwụkwọ Ekike, nwere ike ime ka ngwaahịa gị dị mma. Akwụkwọ . Akpa nwere ike plastic nwere, nwere ike ibu ibu nke
Akpụ aka na ahaziri gị aka
Akpụ aka na ahaziri gị aka Igbe aka, igbe dị ọnụ ala ma bụrụkwa nke dị elu maka ngwugwu eji eme ihe. Otu igbe mpempe akwụkwọ ahaziri iche, jiri akara na ahaziri ahaziri ya gosipụta atụmatụ ngwaahịa gị. Igbe dị ọnụ ala na njiri mara aha, nke ahaziri iche nwere ike ịkwakọ ngwaahịa dị iche iche. Liyang Paper ngwaahịa...
Akwukwo ngwungwu kraft
Akwukwo ngwungwu kraft Igbe mpempe akwụkwọ Kraft One Piece, dị mfe ọfụma na ịkwakọ, nhọrọ dị mma maka nkwakọ ngwaahịa. Mpempe akwụkwọ Kraft, jiri mpempe akwụkwọ kraft dị elu, sie ike na ọkwa dị mma. Otu igbe nwere akara, nke e biri ebi dị mfe nwekwara ụdị pụrụ iche, mara mma, Liyang Paper ngwaahịa co., Ltd bụ ụlọ ọrụ...
Igbe onyinye okpokoro nke okpokoro nke okpu
Igbe onyinye okpokoro nke okpokoro nke okpu Igbe nkwakọ ngwaahịa ọla, igbe onyinye dị oke ọnụ maka ọla, klas dị elu na nke dị elu. Igbe ihe eji achọ mma kaadiboodu, igbe mpempe akwụkwọ edepụtara edepụtara nke nwere ezigbo ihe ederede. Igbe mpempe akwụkwọ nwere akara e biri ebi, nwere ike dakọtara na otu akwụkwọ mpempe...
igbe kaadiboodu onyinye onyinye agbamakwụkwọ na mkpuchi
igbe kaadiboodu onyinye onyinye agbamakwụkwọ na mkpuchi A na-eme mkpọ igbe onyinye agbamakwụkwọ n'ụdị igbe dị mfe: mkpuchi na igbe dị n'okpuru, mana ọ na-adị mma okomoko site na akwụkwọ mmado CMYK dị elu, ị nwekwara ike ịhọrọ akwụkwọ pụrụ iche ndị ọzọ dị ka akwụkwọ pel, akwụkwọ ederede, akwụkwọ ọla edo na ihe...
Igbe onyinye Square
Igbe nchekwa igbe nwere ike iji mkpuchi